Uncategorized – Page 63 – Shabakadda Amiirnuur
Wararka ka imaanaya xad beenaadka ay wadaagaan Kenya iyo Soomaaliya ee dhanka gobolka Gedo ayaa sheegaya in weerar xooggan lagu qaaday mid kamida saldhigyada ciidamada gummeysiga KDF. Saaka aroortii ayay xoogaga Al Shabaab weerar loo adeegsaday madaafiic ku qaadeen saldhigga ciidamada Melleteriga Kenya ee kuyaal duleedka degmada Ceelwaaq. Ilo wareedyo […]
War rasmi ah oo kasoo baxay Dowladda Burundi ayay ku xaqiijisay in ciidamo badan looga dilay weerarkii aadka u xooganaa ee billaawgii isbuucaan ka dhacay deegaan katirsan gobolka Shabeellaha dhexe. Afhayeen Melleteri oo u hadlay dowladda Burundi ayaa sheegay in ugu yaraan 6 askari looga dhigay weerar dhabbagal ah oo […]
Dowladda Itoobiya ayaa billowday iney markan si toos ah ugu lug lahaato doorashada magaalada Kismaayo ee maamulka Jubbaland xilli uu khilaaf xooggani ka dhex jiro musharraxiinta iyo hogaamiyaha maamulkaas, Axmad Madoobe. Qaar kamid ah saxaafadda caalamka ayaa baahisay in wafdi ka socda Itoobiya uu kusoo wajahan yahay magaalada Kismaayo si […]
Wararka naga soo gaaraya magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud ayaa waxay sheegayaan in ay halkaa ka socdaan kulamo xasaasi ah oo looga hadlayo khilaafka soo kala dhex galay ra’iisulwasaaraha DF iyo madaxda kooxda Suufiyada. Khilaafka ayaa ka dhashay kala shaki dhanka ammaanka ah, waayo ra’iisulwasaaraha ayaa wuxuu doonayaa in xarumaha […]
Dhammaan wilaayaatka islaamiga ah ee dhaca Koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya waxaa laga dareemayaa qulqulka Odayaal Towbadkeenayaan ah kuwaas oo ay ka qeyb qaatay soo xuliddii xildhibaannada baarlamaanka dowladda Federaalka. Odayaashan oo ka faa’iidaysanaya cafiskii ya fidisay Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa tiigsanaya wilaayaatka islaamiga ah si ay halkaas isaga diiwaan […]
بسم الله الرحمن الرحيم Magacaygu waa Ust. Cali Xaai Maxamad, oo ku nool magaalada Muqdisho ee Caasimadda Soomaaliya. Inta badan ma jecli inaan warbaahinta ka hadlo, hab qoraal iyo hab muuqaal ama cod ahaan intaba, balse waxaa maanta igu dhaliyay arrin aan is iri waajib ayay kugu tahay. Haddaba aqristayaal […]
Khassaare Culus oo Ciidamada Burundi Lagu Gaarsiiyay Weerar Ka Dhacay Sh/Dhexe.
Ciidamada Xarakada Al-Shabaab ayaa maanta gobolka Shabeelaha Dhexe ku weeraray ciidamada Burundi, waxaana la waramayaa in khasaare kala duwan la gaarsiiyay shisheeyahaas. Weerarka ayaa waxa uu ka dhacay inta u dhaxaysa Balcad iyo Gololey, halkaasoo lagu helay kolonyo ciidamada Burundi ah. Askarta Burundi ayaa halkaa ka waday hawllo ay ku […]
Maxkamadda ku dhaqanka shareecada Islaamka wilaayada Jubbooyinka ayaa xukun dil ah ku fulisay Nin saaxir ah islamarkaana kufsaday gabar uu dhalay. Fagaare weyn oo kuyaal degmada Saakoow ee Gobolka Jubbada dhexe ayaa shalay gelinkii dambe xukun dil ah lagula fuliyay Ibraahim Macallin Cabdullaahi oo lagu heley in uu ahaa Saaxir, […]